गुठीको हजारौं रोपनी‘जग्गा हडप्न’ विधेयक, राजधानीमा मसाल जुलुस र सभा
काठमाडौं,२८ जेठ । सरकारले गुठीको हजारौं रोपनी जग्गा भूमाफियाले लिन मिल्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको गुठी विधेयकविरुद्ध सदन र सडकमा चर्को विरोध भएको छ । गुठी सञ्चालन र बन्दोबस्तीको नाउँमा विधेयकले प्राधिकरणको परिकल्पना गरी गुठी रकमी, पुजारी, महन्त, गुठियारहरुको अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोजेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । ‘गुठीको जग्ग..
खोलामा पल्टियो भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठको गाडी
स्याङ्जा, २८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ चढेको गाडी स..
देशभित्र र बाहिरका सबैको साथ र विश्वास आवश्यक छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र र बाहिर रहेका सबै ..
गुठी विधेयक संविधानको अनुकूल छः मन्त्री अर्याल
काठमाडौँ, २७ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अ..
भीमदत्तनगर, २७ जेठ । तीन दिनअघि कञ्चनपुर र कैलालीमा आएको भीषण हावाहुरीबाट भएक..
स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं,२७ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएको भन्दै मितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफलपछि समितिले लोकसेवा आयोगलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको..
दुई हात गुमाएकी मेघालाई उपचारका लागि अमेरिका लैजाने
काठमाडौँ, २७ जेठ । नारायण रिना मेमोरियल फाउण्डेशनले दुर्घटनामा परी दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेलाई उपचारका लागि अमेरिका लैजाने भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापना भएको फाउण्डेशनले आइतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै हात गुमाएकी घिमिरेलाई उपचार लागि अमेरिका लैजान लागेको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा फाउण्डेशनका अध्य..
प्रधानमन्त्री ओलीले आज श्रम सङ्गठन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने
जेनेभा, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । आज नै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीस सरकारका वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका नेतासँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ । जेनेभाका विभिन्न कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री ओली आजै संय..
पूर्वाधारै नभएका शिक्षालय नमुना घोषित
काठमाडौं,२७ जेठ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भवन नभएका र पढाउने विषय यकिन नभएका तीन प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरेको छ । समाचारस्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको दबाबमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) ले महोत्तरीको बर्दिवासस्थित खयरमारामा निर्मल लामा प्राविधिक शिक्षालय, चितवनको माडीमा दिवाकर प्राविध..
सशस्त्रमा रासन अनियमितता,डिआइजीमाथि कारबाही
काठमाडौं,२७ जेठ । सिपाहीलाई बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनको पैसा खाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कारबाहीमा परेका छन् । सुनसरीस्थित नम्बर १ बराह बाहिनीका डिआइजी मन्दीप श्रेष्ठसहित आधा दर्जन अधिकारीमाथि सशस्त्रले कारबाही सुरु गरेको हो । बाहिनीकै प्रहरीले गरेको उजुरीका आधारमा एआइजी नारायणबाबु थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिन..
कोरिया जान १० हजार सिट, ८४ हजारले दिए परीक्षा
काठमाडौं,२७ जेठ । रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना बोकेका बेरोजगार नेपाली युवाले भाषा सिक्न मात्रै वर्षमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत ठूला सहरमा भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता इन्स्टिच्युटले एकजना युवाबाट एक वर्षको कोर्स पढाएबापत औसत २० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यस हिसाबले ९२ हजार..
काठमाडौँ, २६ जेठ । इमान्दार प्रयास भयो भने जस्तोसुकै अप्ठ्यारो काम पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनःस्थापित गरेको छ । निरन्तरको प्रयासपछि प्राधिकरण स्वयंले नै रुग्ण आयोजनाको सूचीमा राखेको कूल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको आज सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । निर्माण व्यवासायी..
पोखरामा हालसम्मै ठूलो खानेपानी आयोजना अघि बढाइँदै
काठमाडौँ, २६ जेठ । निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण समस्यामा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समस्या देखिए पनि सरकारले पर्यटकीय राजधानी कास्कीलाई केन्द्रमा राखेर बृहत् खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले कास्कीमा अगाडि बढाउन लागेको सो परियोजनालाई मेलम्ची पछिको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको सङ्ज्ञा दिएको छ । पोखर..
मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन: मन्त्री बाँस्कोटा
बाँके, २६ जेठ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेले नेपालगञ्जमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक श..
किसानलाई वर्गीकरण गरी पहिचान गर्ने:कृषि मन्त्री खनाल
काठमाडौँ, २६ जेठ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरी नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको दिगो विकासका लाग..
सरुवा जान अटेरी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बित
रौतहट, २६ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरिएको ठाउँमा जान अटेरी गर्ने गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीलाई निलम्बन गरेको छ । जेठ १ गते शैल्य शिखर नगरपालिका दार्चुला सरुवा भएका कार्कीले त्यसको अवज्ञा गर्दै गौर नगरपालिकामै कामकाज जारी राखेपछि मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गरेको हो । सं..
गुठी विधेयकको विरोध गर्नेमाथि प्रहरीको धरपकड
काठमाडौं, २६ जेठ । गुठी विधेयकको विरोध गर्दै प्रदर्शन गर्नेलाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ । आईतावारमाइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकको विरोध गर्ने प्रदशनकारीमाथी प्रहरीले पानीको फोहोरा हान्नुका साथै धरपकड गरेको हो । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीब..
हावाहुरीबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले डेढ लाख
कैलाली,२६ जेठ । कैलाली र कञ्चनपपुरमा गत बिहीबार हावाहुरीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनही डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हावाहुरीमा परी ज्यान गुमाएका दुई परिवारलाई राहात स्वरुप प्रति परिवार एकलाख पचास हजार दिने निर्णय गरेको हो ।
मेलम्ची, २६ जेठ । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–५ स्थित विन्जेलमा झाडापखलाको महामारी फैलिएको छ । झाडापखलाका कारण एकै गाउँका ५० बढी बिरामी भएका छन् । केहीको स्थिति गम्भीर रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । विरामीको खाडिचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पताल र स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालको एउटै ..
कास्की, २६ जेठ । कास्की प्रहरीले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका १८ नेता÷कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार शनिबार राति उनीहरुलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ उरी भन्ने ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा विप्लव समूहका कास्की सेक्रेटरी आक्रोश भनिने विवेक भण्डा..
हावाहुरीका कारण कञ्चनपुरमा विद्युत्का संरचनामा रु ७५ लाखभन्दा बढीको क्षति
कञ्चनपुर, २६ जेठ । हावाहुरीका कारण कञ्चनपुरमा रहेका विद्युत्का संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । हावाहुरीका कारण विद्युत्का संरचनामा रु ७५ लाखभन्दा बढी क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । हावाहुरीले विद्युत् प्रशारण लाइनका पोल ढालेको, टुटेको, तार चुडालेको र ट्रान्सफर्मर पोलसँगै खस्दा क्षति भ..
प्रधानमन्त्री ओली दोहाबाट जेनेभा प्रस्थान
काठमाडौँ, २६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमणका क्रममा केही बेरअघि कतारको दोहाबाट स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै युरोप भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्र..
विश्वविद्यालय शिक्षा समयसापेक्ष र जनमुखी हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ, २६ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वविद्यालय शिक्षा समयसापेक्ष र जनमुखी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण’ विषयक दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै नवीनतम् खो..
प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण आजबाट
काठमाडौँ, २५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे युरोप भ्रमणका लागि शनिबार अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ । उक्त भ्रमण दुई पक्षीय हितमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्नुहुँदै डा...
भक्तपुर,२५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने देखिएकाले केही प्रतिक्रियावादी तत्वहरू अत्ताल्लिएको बताउनुभएको छ । उहाँले केही तत्वहरू जनतालाई भड्काउने र अल्मल्याउने काम गर्दैछन् र त्यस्ता तत्वहरू सफल नहुने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकामा शुक्रबार एकै प..
Page 40 of 172« First«...102030...3839404142...506070...»Last »